WTE PROGRAMA AFFILIATE - World Trade Exchange
Refereno ary ahazoana $ 40M amin'ny komisiona!
Mandoa vola $ 40K ka hatramin'ny $ 40M isaky ny mpanjifa resahina izahay wte!
Afaka mahatratra hatramin'ny $ 40M ianao nefa tsy mampiasa vola amin'ny alàlan'ny fanondroana ny mpanjifa hiditra ao WTE mpikambana at https://worldtradeexchange.org / . Ny sisa ataonao dia mampahafantatra WTE na alefaso amin'ireo olona afaka mandray soa avy amin'ny WTE serivisy ho mpikambana. Tsy mila asa na fampiasam-bola avy aminao.
maninona no manatevin-daharana ny wte fandaharana?
Afaka mahazo hatramin'ny $ 40m isaky ny mpanjifa voatondro ianao wte!
io no PROGRAMAM-PIFAASAANA MAFY MAFY AMIN'IZAO TONTOLO IZAO!
WTE mitarika fidiram-bola amina miliara dolara ho an'ny marika lehibe sy kely, manerantany.
WTE no fikambanana mpikambana be karama indrindra eran'izao tontolo izao satria manome tombony sy vahaolana ary valiny miavaka izahay. Manampy ireo fikambanana izahay hamaha ny olana ara-bola sarotra indrindra eto an-tany. Manampy ireo mpikambana hahatratra tanjona tsy azo tanterahina sy vokatra azo tratrarina izahay!
Amin'ny maha fikambanana mpikambana be karama indrindra anay dia afaka manome valisoa malalaka ireo mpiara-miasa aminay izahay ary miasa amin'ny programa afiliana / referral be karama indrindra eto amin'izao tontolo izao.
MANDEFANA ANAO NY KOMISIN'NY AFFILIATE ANDRIAMANITRA ANAO!
Fantatray fa zava-dehibe ny fidiram-bola ho anao amin'ny fihazonana asa isan'andro. Izany no antony andoavanay isan'andro ny kaomisinao Affiliate amin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny rafitra mandeha ho azy izay miasa 24/7. Raha vantany vao manamarina ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny referral anao ny rafitray mandeha ho azy dia ekena ny fandoavanao ary ny komisiona anao dia hafindra eo amin'ny kaontinao any ivelany avy hatrany. Ny fandefasana banky anay dia azo isaina amin'ny kaontinao ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 48 ora. Tsotra toy izany! Tsy misy fahatarana na miandry karama.
Ny fandoavam-bola ataon'ny komisiona mandeha ho azy dia miantoka anao hahazo karama isan'andro!
HAHAZO tapakila $ 5M ianao isaky ny klioba tadiavinao WTE!
Rehefa manasa olona hanatevin-daharana ianao WTE, ary misoratra anarana ho an'ny WTE mpikambana, hahazo tapakila $ 5M ianao. Ny mpanasa anao dia hahazo tapakila $ 5M sy ny rehetra WTE tombony ho an'ny mpikambana ao amin'ny https://worldtradeexchange.org/.
AZA HADINO FA: Ity tolotra ity dia ho an'ny mpiara-miasa aminy izay manondro ireo mpanjifa 100 voalohany amin'ity volana ity. Raha manatevin-daharana ilay mpanjifa notondroinao WTE dia eo amin'ireo mpanjifa 100 voalohany nanatevin-daharana WTE ho an'ity volana ity dia hahazo tapakila $ 5M avy ianao sy ny olona nomenao.
IZAY AZONAO VIDINA
WTE MEMBERSHIP dia be fangatahana ary mivarotra toy ny WILDFIRE
Mba hahombiazana amin'ny programa afiliana dia tsy maintsy tadiavina be ny vokatra arosonao.
WTE Ny serivisy ho mpikambana dia be fangatahana ary mivarotra toy ny afo mando.
WTE no fikambanana tokana mpikambana ao amin'ny firenena maneran-tany izay manampy ny orinasa sy ny orinasa hahazo trosa tsy misy zana-bola amin'ny vidiny aotra, hiteraka fidiram-bola azo antoka, hivarotra ny karazan-tahiry rehetra, handoa trosa amin'ny vidiny aotra, hampiakatra 10,000% ny vola miditra ary manao fividianana sy fampiasam-bola hatramin'ny fihenam-bidy 90% ao anatin'ny 24 ora.
lasa milionera eo noho eo, ary misotro ronono manankarena!
Raha te hanan-karena haingana ianao ary “misotro ronono manankarena” miaraka amin'ny orinasa mpamatsy vola miditra mora vidy indrindra eto an-tany - manangona vola am-tapitrisany dolara isam-bolana isam-bolana izay vita ho anao ny zava-drehetra, dia mila miditra amin'ilay WTE programa afiliana anio.
The WTE programa afiliana dia fotoana iray ahazoana harena manankarena. Raha misy olana amin'ny manankarena haingana dia azonao atao ny mijanona tsy mamaky amin'izao fotoana izao ary manohy amin'ny drafi-piainanao mirary manakarena na mitady ireo programa sy fotoana mety hampiadana anao.
Alohan'ny hijanonanao tsy hamaky intsony dia mijery ny fitaratra ianao ary manontania tena hoe: "Manao ahoana ianao hatreto, miaraka amin'ny fomba manakarena mihisatra?"
Ny programa afiliera ho anay dia ho an'izay olona fatra-paniry laza, manolo-tena, voatosika tanteraka hanao fiovana manerantany, ary tapa-kevitra mafy hanatratra ny fahaleovan-tena ara-bola faran'izay haingana.
HANANA FANomezana $ 6m ianao!
Ny sarany ho an'ny WTE Ny fandraisana mpikambana 1 dia $ 6M isan-taona. Mitovy amin'ny WTE mpiara-miasa, afaka lasa a WTE Mpikambana 1 fanombohana nefa tsy mandoa sarany. Ity ny $ 6M WTE fanomezam-pahasoavana ho mpikambana dia azonao atao ny mahazo izany WTE Affiliate.
Mitovy amin'ny WTE Mpikambana 1 fanombohana, WTE dia hanome anao $ 10M amin'ny trosa tsy misy zanabola amin'ny vidiny aotra, hiteraka $ 10M amin'ny vola miditra amin'ny varotra ho anao, hivarotra hatramin'ny $ 10M ny tahiry nataonao, handoa hatramin'ny 10M $ ny trosanao amin'ny vidiny aotra, hampitombo ny vola miditrao amin'ny 10,000%, ary manaova fividianana $ 10M sy fampiasam-bola ho anao. Ary tombony maro hafa.
NY toe-piainana hahazoana ity fanomezana 6 tapitrisa $ ity: Rehefa avy nanondro ireo mpanjifanao dimy voalohany ianao, WTE hanome anao ho mpikambana Startup 1 tsy misy vidiny.
BENEFITS OF WTE MPIKAMBANA
Kaomisaria roa sy vola ary fidiram-bola
Rehefa misy manindry ny rohy ifandraisana anao ary misoratra anarana handoavana karama WTE kaonty mpikambana miaraka aminay, azonao ny 20% amin'ny saram-piavian'izy ireo. Noho izany, raha misoratra anarana amin'ny fidirana $ 6,000,000 Startup 1 ianao dia mahazo $ 1.2M. Ary koa, ianao dia hahazo vola mitohy miverimberina avy amin'ny saram-pifandraisan'ny olona nomenao mandritra ny andro maha-mpikambana azy ireo.
Ankoatry ny fahazoana komisiona 20% ho an'ny varotra mivantana rehetra lazainao dia hahazo komisiona 10% amin'ny varotra ny mpiara-miasa ianao. Midika izany fa olon-kafa no mivarotra ary mahazo komisiona ianao miverimberina. Rehefa manatevin-daharana ny mpanjifa WTE maha-mpikambana anao amin'ny alàlan'ny rohy ifandraisanao, ho voaraikitra eo ambanin'ny kaontinao mandra-pahafatiny izy ireo. Midika izany fa hahazo komisiona amin'ny varotra miverimberina ianao, ao anatin'izany ny fifanakalozana rehetra mandritra ny maha-mpikambana azy ireo.
lasa a wte mpiara-miasa antitra, mahazoa komisiona 45% ary mahazoa fanomezana $ 200M!
+ M Makà ROLLS ROYCE PHANTOM FIASA vaovao NA FIARAHAM-PIRENENA SAFIDY!
Afaka ho lasa ianao WTE mpiara-miombon'antoka zokiolona ary manomboka mahazo hatramin'ny 45% isaky ny raharaham-barotra ataonao amin'ny fahazoana komisiona $ 20M ao anatin'ny 30 andro.
Mitovy amin'ny WTE mpiara-miasa zokinjokiny, ho lasa WTE Mpikambana Premium nefa tsy mandoa sarany. Ny sarany ho an'ny WTE Ny mpikambana voalohany dia $ 200M isan-taona. Ity dia $ 200M WTE fanomezam-pahasoavana ho mpikambana dia azonao atao ny mahazo izany WTE Affiliate.
Mitovy amin'ny WTE Mpikambana Premium, WTE dia hanome anao $ 20B amin'ny trosa tsy misy zanabola amin'ny vidiny aotra, hiteraka $ 20B amin'ny vola miditra amin'ny varotra ho anao, hivarotra hatramin'ny $ 20B amin'ny fanatobiana entana anao, handoa hatramin'ny $ 20B ny trosanao amin'ny vidiny aotra, hampitombo ny vola miditrao amin'ny 10,000%, ary manaova fividianana sy fampiasam-bola 20B $ ho anao. Ary tombontsoa maro hafa.
Ho bonus ahazoana ny WTE toerana ambony mpiara-miasa, WTE hanome anao fiara vaovao Rolls-Royce Phantom 2021 vaovao na fiara mihaja hafa ankafizinao.
Mahazoa vola $ 1,000 $ amin'ny famoahana olona hafa amin'ity fandaharana ity.
Azonao atao koa ny manondro ireo mpiara-miasa hafa hiditra ao WTE programa afiliana ary mahazoa bonus $ 1,000 ho an'ny mpiara-miasa tsirairay avy izay misoratra anarana eo ambaninao. Raha manondro mpikambana 250 ianao hanatevin-daharana an'ity programa ity maimaim-poana dia hahazo bonus $ 250,000 ianao.
Ho fanampin'ny bonus $ 1,000 $ ho an'ny mpiara-miasa tsirairay notondroinao dia hahazo 10% ihany koa ianao amin'ny varotra mpanjifa amin'ireo mpiara-miasa voatondro anao!
Azafady azafady fa handoa ny bonus cash ho an'ny mpiara-miasa iray izahay raha vantany vao voamarina ny kaonty Affiliate ho kaonty mavitrika mifototra amin'ny fandefasana mpanjifa voaloa. Midika izany fa handoa ny $ 1,000 isaky ny mpiara-miasa voatondro isika raha toa ka nanondro mpanjifa iray karama farafahakeliny ilay mpiara-miasa. Ity fepetra ity dia natao hanakiviana ny mpiara-miasa amin'ny fisoratana anarana kaonty Affiliate ao anaty kaontiny.
TRANSPARENCY TSY MISY MIORA Miorina amin'ny rafitra fanandramana tena izy
Miaraka amin'ny rafitry ny fanaraha-maso maharitra sy azo antoka ao amin'ny kaonty Affiliate anao, ny WTE programa afiliana manolotra mangarahara tsy manam-paharoa. Ho hitanao avy amin'ny tabilao kaonty miaraka aminao ny fijerinao ny rohy ifandraisany, fitsidihana, tsindrio, fiovam-po, fisoratana anarana, fandoavam-bola, ary ny varotra raha mitranga amin'ny fotoana tena izy, ao anatin'izany ny fanentanana manokana mba hahitanao ny fomba fampiroboroboana mety indrindra.
Raiso ny tatitra an-tsipiriany momba ny fampisehoana amin'ny alàlan'ny tabilao handinihanao ireo ezaka nataonao
COOKY TRACKING 5-taona
Manana faharetana cookie mandritra ny 1,825 andro na 5 taona izahay. Midika izany fa raha manondro mpanjifa ianao anio ary miditra izy ireo WTE ao anatin'ny 5 taona ho avy, dia homena mari-barotra amin'ny varotra ianao. Ny referral anao dia hojerena mandritra ny 5 taona, sanatria izany dia tsy vonona ny hividy ny mpanjifa amin'ny fitsidihany voalohany. Ity dia tsara lavitra lavitra noho ireo programa Affiliate hafa izay manamboatra a fanarahana ny faharetan'ny cookie mandritra ny 30 ka hatramin'ny 90 andro.
FANOHANANA MPITONDRA AFFILIATE DEDICATED
Hanana mpitantana mpiara-miasa manokan-tena ianao hijoro eo akaiky hanampy anao amin'ny fanontaniana momba ny vokatra. Raha manana fanontaniana ianao dia mahazo valiny.
MANINO MBOLA REFER WTE AMIN'NY MPAMONJY ANAO?
Inona no wte tolotra?
Manampy ny mpanjifa izahay hahatratra tanjona tsy azo tanterahina ary ny vokatra azo tratrarina!
WTE manome ny mpikambana tombontsoa, ​​vahaolana ary valiny miavaka. WTE manampy ny mpikambana hahatratra tanjona toa tsy azo tanterahina ary vokatra azo antoka amin'ny orinasany. Tsy misy ezaka, fotoana na risika ilaina avy aminao mba hahazoana valiny. WTE manao ny 100% amin'ny asa ho anao. WTE dia hanampy anao hahatratra ireto valiny manaraka ireto:
Makà $ 10M ka hatramin'ny $ 50B amin'ny trosa tsy misy zanabola ao anatin'ny 24 Ora.
Misorata anarana hahazoana kaonty AFFILIATE MAIMAIMPOANA
Midira maimaim-poana WTE kaonty mpiara-miasa. Tsy misy sarany takiana na fizahana fankatoavana ho an'ny fisoratana anarana. Vantany vao misoratra anarana amin'ny kaonty mpiara-miasa ianao dia hiditra ho azy ao amin'ny dashboard ho anao hahafahanao manomboka mandroso avy hatrany.
Ao amin'ny tabilao kaontina misy anao, dia hahita rohy mifandraika sy votoaty, tolotra ary famoronana isan-karazany ianao eo ambanin'ny tabilao "MY LINKS" azonao ampiasaina hampiroboroboana WTE maha-mpikambana.
AZA MOMBA NY ZARA.
Midira ao amin'ny kaonty anao raha te handika ny tolotra, atiny ary rohy mpiara-miasa aminao hizara amin'ny mpihaino anao, ny mpanjifanao, ny mpanjifanao, ny namanao, ny mpanaraka anao, ny fifandraisana ary ny tamba-jotra.
mampirisika wte tolotra
Atombohy ny fampiroboroboana WTE maha-mpikambana amin'ny fizarana ny atiny, tolotra ary famoronana ao ambanin'ny kiheba "MY LINKS" ao amin'ny kaontinao mpiara-miasa amin'i ny mpihaino anao, ny mpanjifanao, ny mpanjifanao, ny namanao, ny mpanaraka anao, ny fifandraisana ary ny tamba-jotra.
Rehefa misy manindry ny rohy ifandraisanao ary misoratra anarana WTE mpikambana, hahazo 20% amin'ny saram-piavonany ianao. Ohatra, raha misoratra anarana amin'ny fidirana $ 2M Premium ianao dia mahazo 400,000 $. Ary koa, ianao dia hahazo vola mitohy miverimberina avy amin'ny saram-pifandraisan'ny olona nomenao mandritra ny andro maha-mpikambana azy ireo.
Ankoatry ny fahazoana komisiona 20% ho an'ny varotra mivantana rehetra lazainao, dia hahazo 10% amin'ny varotra mpanjifa avy amin'ny mpiara-miasa tadiavinao koa ianao! Rehefa manatevin-daharana ny mpanjifa WTE maha-mpikambana anao amin'ny alàlan'ny rohy ifandraisanao, hojerena mandritra ny fiainana izy ireo. Midika izany fa hahazo komisiona amin'ny varotra miverimberina ianao, ao anatin'izany ny fifanakalozana rehetra mandritra ny maha-mpikambana azy ireo.
Raha vantany vao manamarina ny fandoavam-bola avy amin'ny referrals anao izahay, ekena ny fandoavanao, ary ny komisiona anao dia nafindra ho any amin'ny kaontinao any amin'ny banky amin'io andro io ihany. Ny fandefasana banky anay dia azo isaina amin'ny kaontinao ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 48 ora. Ny fandoavam-bola ataon'ny komisiona mandeha ho azy dia miantoka anao hahazo karama isan'andro!
Araho ny fahombiazanao
Azonao atao ny manara-maso ny fahombiazan'ny fampiroboroboana anao amin'ny alàlan'ny tabilao kaontinao. Azonao atao ny mahita ny fijerinao ny rohy ifandraisana, ny fitsidihanao, ny tsindrio, ny fiovam-po, ny fisoratana anarana voatondro (firy ny olona notondroinao), ny karama (ny vaomiera azonao), ary ny varotra rehefa mitranga amin'ny fotoana tena izy izany. Azonao atao ny manindry ny takelaka 'TRANSACTION' sy 'REPORTS' eo amin'ny menio ankavia eo amin'ny dashboard afiliana anao hijerena ireo tatitra momba ny fifampiraharahana sy ny zava-bita.
fametrahana fanontaniana matetika
MISOROA HO AN'NY WTE PROGRAM AFFILIATE